Third Mainland Bridge: Onweghi ihe mere akwammiri a - Fashola - BBC News Ìgbò
Third Mainland Bridge: Onweghi ihe mere akwammiri a - Fashola
21 Eprel 2019
Onye mịnịsta na-ahụ maka ọkụ, ọrụ na ebe obibi bụ Babatunde Fashola ekwuola na onweghi ihe mere Akwammiri Third Mainland.
Mịnịsta na-ahụ maka ọkụ, ọrụ na ebe obibi bụ Babatunde Fashola ekwuola na onweghi ihe mere Akwammiri 3rd Mainland. Ọ gwara ndị ọgwọ ụgbọala ka ha gaa n'ihu na-eme njem n'elu akwammiri a na ọ gaghị ada. O kwukwara na gọọmentị enyochala akwammiri ahụ bụ nke ha ga-amlite ọrụ n'oge n'adịghị anya. Cheta ọtụtụ ndị bi na Legọs chị obi ha n'aka ka ihe onyonyo a na-eke na soshal midia na-atụ aka na akwammiri nke ukwu dị na Legọs bụ nke Bekee kpọrọ Third Mainland Bridge chọrọ ịda.
Third Mainland Bridge a bụ akwammiri nke kachasị too ogo n'ọdịda anyanwụ nke Afịrịka, ma bụkwara ọkachamkpa n'ihe banyere njem na Legọs.
Akụkọ na-ewu na soshal midia na-akọwa na ndị ọrụ nọ n'akwammiri a ugbua, mana ọ bụ naani onye na-azacha ihe ka BBC Igbo hụrụ.
Eziokwu bụ na-arụchara ọrụ na ya bụ ụzọ, mana ọ bụ ite kọrọta ka emere. Dịka ụdị a dị n'aka ekpe.
Ebe a ka ihe onyonyo ahụ na-egosi.
Dịka anyị siri hụ, ya bụ ebe riri mperi
Ebe a ekwesịghị ighe ọnụ chakoo etu a.
Ọ dị njọ n'anya.
Ọkachasị ma ịlete etu okwesiri ịdị dịka etu ebe a dị.
Mana ndị ọkachamara sị obi daa anyi juu, na akwa arụrụ ọfụma kwesiri ị na-enwe nkebi, ma na emegharị ahụ. Ya mere ejiri etinye ya nkebi, dịka nke a dị n'Akwa Third Mainland Bridge
Nkebi akwa na-enye ya ohere ikuru nwa ụme, adịghi ama ama, makana akwa arụrụ ọfụma kwesiri ị na-agba egwu obele obele.
Ọ bụ nkebi akwa a na-anọ n'etiti ohere a enyere ka o ji na-ekute ụme.
Ya bụ na obi ekwesịghị ịmapụ gị ma akwammiri ị no n'elu ya na-emegharị nwa ahụ, mana nke ebe ahụ nwere mperi na Akwa Third Mainland kwesiri ka ndị ọdị n'aka tinye anya na ya ka ọ dị ka ụmụnne ya.
Ọkachasị etu Legọs siri bụrụ obodo akwammiri ka nkụ n'ime ya.
Ihe ọzọ ndị ọkachamara kwuru bụ: Akwammiri na-efegharị akụkụ abụọ ma ikuku kuo, na amalikwa elu ma mmadụ na ụgbọala na-agafe. Akwamiri kwesiri ịna efe n'akụkụ, nakwa elu na ala. Nke a ga-eme ka ọghara ịgbaji. Onwere ohere a na-ahapụ n'akwammiri ịnyere ya aka ịnwete ohere maka otụtụ igwe ejiri rụọ ya. Ọ bụru na ohere ndị a adịghị ya, oke ifufe kuo maọbụ anwụ chasie ike, igwe ejiri rụọ ya koo afọ, akwammiri ahụ ga-agbaji ma dakasịa. Ohere na adị n'akwammiri ukwu na-enwe eze igwe. Nke na-anọ n'akwammiri nta bụ rọba ka eji eme ya nke bụ na ọ na-akwa mkpumkpu n'ịsi ya abụọ. Ya bụ mgbe ọzọ ị na agbafe akwammiri, cheta na mmegheghị ahụ ndị a ọ na-emegherị bụ ka esi rụọ ya.
BBC kpọrọ Maazị Hakeem Bello bụ ọnụ na-ekwuru Babatunde Fashola bụ Minista na-ahụ maka ọrụ na ụlọ na Naịjirịa. Maazị Bello si ka obi daa ndi mmadụ juu, na onweghi ihe mmapụ obi na-eme. Ọ sị "akwa dị etu okwesiri ịdị. Anyi emeela nyocha wee chopụta na onweghi ebe ojiri chọ isi daa."
Emepeela akwammiri Third Mainland
26 Ọgọọst 2018
Vidio, Nwoke wụbanyere n'akwa mmiri 3rd Mainland
2 Nọvemba 2018